कर्मचारी समायोजनका लागि १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ दरबन्दी कायम ! « NBC KHABAR
कर्मचारी समायोजनका लागि १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ दरबन्दी कायम !
संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश , २०७५’ अनुसार सरकारका तिनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको टुंगो लागेको जनाएको हो ।
अब कर्मचारीले आफ्नो विवरण दर्ता गरेर समायोजन हुन चाहेको तह रोज्न पाउनेछन् । तर, समायोजनको आधार जेष्ठतालाई मानिएकाले जेष्ठ कर्मचारीले रोजेर बाँकी रहेका ठाउँमा मात्र अन्य कर्मचारीहरुको पदस्थापन हुनेछ । मन्त्रालयले नै निर्माण गरेको सफ्ट्वेयरमा कर्मचारीले आफु समायोजन हुन पाउने फारम अनलाइनमार्फत् भर्न सक्नेछन् ।
सरकारले यसअघि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आजदेखि संघीय संसदमा पेश भएका छन् भने छलफल समेत सुरु गरिएको छ । यता, कतिपय कर्मचारीले अध्यादेशमा आफूहरुको वृत्तिविकासमा बाधा पुग्ने खालका प्रावधान पनि रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
तर, मन्त्रालयले भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले पनि मुख्य सचिव बन्न पाउने भएकाले वृत्तिविकासको बाटो नरोकिएको दावी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको आन्तरिक बढुवा र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा आउँन सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।